Internet Explorer5& 6[ပြင်ဆင်ရန်]
အသစ်ဖြစ်သော ဘရောက်ဆာများ ထုတ်ဝေခြင်း[ပြင်ဆင်ရန်]
HTML5 beginnings and Presto rendering engine deprecation[ပြင်ဆင်ရန်]
↑ Thurrott၊ Paul (22 January 1997)။ Microsoft and Spyglass kiss and make up။ WindowsITPro။9February 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Microsoft Internet Explorer Web Browser Available on All Major Platforms, Offers Broadest International Support" (Press release). Microsoft. 30 April 1996. Retrieved7November 2014.
↑ "Window Internet Explorer 8 Fact Sheet" (Press release). Microsoft. March 2009. Retrieved 26 August 2010.
↑ The Netscape Blog။ Netscape, AOL။ 2007-12-28 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Firefox 3.5 surpasses IE7 market share။ Geeksmack.net (2009-12-22)။ 2010-05-23 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဘရောက်ဆာ_စစ်ပွဲများ&oldid=414248" မှ ရယူရန်
ပြင်ပလင့် သေနေသော ဆောင်းပါးများ since June 2016
October 2009 မှ အကိုးအကားများ ထပ်မံလိုအပ်သော ဆောင်းပါးများ
October 2016 မှ အကိုးအကားများ ထပ်မံလိုအပ်သော ဆောင်းပါးများ
ဤစာမျက်နှာကို ၃၀ ဇူလိုင် ၂၀၁၈၊ ၁၅:၄၄ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။